HGH ၏အသုံးပြုမှုအတွက်ညွှန်ကြားချက်များ - HGH ဖူးခက်
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ Genotropin HGH ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းညွှန်ကြားချက်များ (YouTube + ရုပ်ပုံများ) HGH မထိုးမီအထွေထွေအကြံပြုချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များဆေးထိုးရန်အချိန်၊ အကြံပြုချက်များသောက်သုံးသောကိုယ်တိုင်ဆေးထိုးရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည် (YouTube + ရုပ်ပုံများ) မည်မျှနှင့်မည်သည့်အပူချိန်ကိုသိုလှောင်ထားသနည်း။ HGH ကိုလေဆိပ်သို့မည်သို့ပို့ဆောင်မည်နည်း။
HGH ကိုလေဆိပ်သို့မည်သို့ပို့ဆောင်ရမလဲ။ လူ့ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းကိုလေယာဉ်ပျံမှာဘယ်လိုသွားရမလဲ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အသုံးအများဆုံးမေးခွန်း - HGH လက်အိတ်၌ယူသို့မဟုတ်အိတ်၌စစ်ဆေး? HGH အားခရီးဆောင်အိတ်တွင် Check In တွင်ထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ယူရန်မှာ - - အဆင်သင့်ဆုံးအခြေအနေများ ...
Genotropin အတည်ပြုခြင်း၊ Pfizer မှ HGH ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ hgh ကုန်ပစ္စည်းလိုင်စင်နံပါတ်ကိုတရားဝင်တောင်းဆိုခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သူအကောင့်မှတစ်ဆင့်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်းကိုအတည်ပြုသည်။ Pfizer ၏ခေါ်ဆိုမှုစင်တာမှတဆင့်ပြုလုပ်သည်။ Pfizer မှသင်၏အီးမေးလ်တောင်းဆိုချက်အရတရားဝင်တုန့်ပြန်မှုကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
IU သည်မည်မျှ Genotropin? Pfizer, Genotropin cartridges မှ IG ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
Pfizer မှ Genotropin တွင် IU ဘယ်ပမာဏရှိသနည်း။ ယနေ့ Pfizer သည်2အမျိုးအစား Genotropin GoQuick ဘောပင် 36 IU (12mg) နှင့် 16 IU (5.3mg) နှစ်ပိုင်းပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းနှစ်မျိုးဖြစ်သောလူ့ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းမှုန့်နှင့်ရေဖြေရှင်းချက် Genotropin cartridges မှထုတ်လုပ်သည်။
စက်တင်ဘာလ 30, 2019
အင်္ဂလိပ်မဟုတ်သော HGH ညွှန်ကြားချက်များကိုမည်သို့ဘာသာပြန်ရမည်နည်း။
ထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်၍ HGH၊ ဆေးသောက်ရန်၊ ထိုးရန်အတွက်ညွှန်ကြားချက်သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ - မက္ကဆီကိုမှစပိန်ဘာသာဖြင့် HGH၊ တူရကီမှတူရကီဘာသာစကားဖြင့် HGH ဤကိစ္စတွင်သင့်ကို“ Google Translator ... ” ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပေးလိုပါသည်။
စက်တင်ဘာလ 28, 2019
HGH ဆေးထိုးများအတွက်အပ်များကိုဘယ်မှာဝယ်လို့ရပါသလဲ။ ဘယ်ဆေးထိုးအပ်ထိုးရန်လိုအပ်ပါသနည်း။
HGH ဆေးထိုးခြင်းအတွက်သင်သည် Ultra-Fine ဘောပင်အပ်များကိုအသုံးပြုရမည်။ 29 gauge၊ 30 gauge သို့မဟုတ် 31 gauge x 0,6-0,8 mm သို့မဟုတ်အခြားအရွယ်အစားရှိအမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိဖောက်သည်များအနေဖြင့်ငွေသွင်းခြင်းဖြင့်အခမဲ့အပ်များကိုအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက် ...
စက်တင်ဘာလ 25, 2019
လူ့ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းထိုးပြီးနောက်အရေပြားအစာအိမ်တွင် HGH အနာ - အဖြေ။
HGH ဆေးထိုးပြီးနောက်အသည်းကွဲခြင်း၏အကြောင်းရင်းများ။ HGH ဆေးထိုးပြီးနောက်အသည်းကွဲခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ခု - က) ၎င်းသည်အရေပြားအောက်ရှိအပ်၏နက်ရှိုင်းစွာထိုးသွင်းခြင်းသည်မှားယွင်းသည်။ ဖြေရှင်းချက် - အပ်ကိုအထက်ပိုင်းအလွှာများထဲသို့ထိုးသွင်းရန်ကြိုးစားပါ။
ဆေးထိုး HGH, Genotropin IU သည်၏ထောက်ခံချက်များသောက်သုံးသောအဘို့အချိန်
အကြောင်းအရာ: 1 ။ နံနကျအခြိနျသို့မဟုတ်ညဦးယံ၌ HGH ဆေးထိုးလုပ်ရမလား?2။ ဒါဟာတစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်3အပေါ်ထိုးသွင်းရန်အရေးကြီးပါသည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘို့အ HGH ၏အကြံပြုချက်များသောက်သုံးသောနံနက်အချိန်၌သို့မဟုတ်ညဦးယံ၌ HGH ဆေးထိုးလုပ်ရမလား? HGH ထိုး၏အဓိကအချက်အမြင့်ဆုံးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဖြစ်ပါတယ် ...
သြဂုတ်လ 25, 2019
ထိုင်းလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်း (somatotropin, HGH) လူအများစုကကြွက်သားအဆောက်အဦအားကစားသမားများ၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါလမ်းကဖြစ်ပါတယ် - HGH ကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုအားပေးအားမြှောက်, တစ်ဦးအားကြီးသောဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကခိုင်မာစေနှင့်ပင်ဖြစ်ပေါ်စေသည် ...